तपाईंको आनन्दको पोका अचम्मका तथ्यहरुसँग आउँछ
नवजात शिशुहरुमा पेटको दुखाई
हवाईजहाजमा बच्चा-बच्चाहरुसँग उड्दा गर्न हुने र गर्न नहुने कुराहरु
मोटोपन केवल एउटा वयस्क समस्या हैन
सोफामा बसेर टिभी हेर्नु सट्टा खेल्न जानुहोस्
एउटा बच्चा - हेरचाहको लागि प्रमाणित निर्देशिका
केटाकेटीहरुमा उच्च रक्तचाप
बच्चाको नखराहरु सँग सम्झौता गर्नुहोस्
तनाव-बच्चाहरु पनि पन्छिन सक्दैनन् !
कठिन टिनेज समय सम्हाल्नु
बुढी औंला चुस्ने बानी रोक्ने उपायहरु
तपाईंहरुका बच्चाहरुको पढाइलाई रमाइलो बनाउने ५ उपायहरु
Q मेरो बच्चाले रक्सी पिउन हुन्छ ?
पक्कै हुदैँन । १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि व्यक्तिलाई रक्सी पिउन अनुमति दिनु हुँदैन ।
Q यदि मलाई मेरो बच्चाहरुको मानसिक, व्यवहारिक, वा भावनात्मक लक्षणहरूको बारेमा चिन्ता भयो भने मेरो बच्चालाई सहयोग गर्न मैले को सँग सल्लाह लिनुपर्छ ?
तपाईंको बच्चाको मानसिक, व्यवहारिक र भावनात्मक लक्षणहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न तपाईंले बाल रोग विशेषज्ञ वा बाल परामर्शदातासँग परामर्श लिनुपर्छ ।
Q बच्चाहरुमा निरासापना वा डिप्रेसन सामान्य छ ? यदि हो भने, यो कति साधारण हुन्छ ?
हो । बच्चाहरुमा निरासापना, यद्यपि धेरै पटक छुट्यो भने, साधारण बाल्यकालको अवस्था हो । किशोरको उमेर बच्चाहरूमा सबैभन्दा प्रभावित उमेर हो । बच्चाहरुको उमेरमा डिप्रेसन वृद्धि हुने संभावनाहरु हुन्छ । यो सामान्यतया केटीहरुमा पाइन्छ । लगभग ११ % बच्चाहरूमा डिप्रेसन हुन सक्दछ । डिप्रेसनका लक्षण र सङ्केतहरू बच्चाहरूमा फरक पर्न सक्छन् र त्यसैले सामान्यतया गलत भ्रामक हुन सक्छ ।
Q मेरो छोरा जनावरहरूबाट धेरै डराउँछ र लगातार रोइरहन्छ । म के गर्न सक्छु ?
ठूला जनावरहरूबाट डराउने कुरा स्पष्ट छ तर बच्चाले तपाईंको घरमा पालेका साना जनावरहरुसँग पनि यस्तै गरेमा तपाईंले केहि सकारात्मक प्रयास राख्नपर्छ । तपाईंले आफ्नो बच्चालाई साना जनावरहरूलाई बिस्तारै परिचय गराएर जनावरहरूको डर हटाउन मदत गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको बच्चालाई जनावरहरुको चित्रहरू देखाउनुहोस् जसबाट तिनीहरु खेल्ने हुन्छन् । एक समयमा साना कदमहरू लिनुहोस् र चीजहरू उठाउन हतार नगर्नुहोस् वा यसलाई आगो लाग्न सक्दछ ।
Q मेरो दुई बर्षकी छोरी आज बिहान बिहानै भर्याङबाट लडिन् । साँझमा उनको धेरै नराम्रोसँग गन्हाउने सेतो दिसा गरिन् ।
लड्ने र सेतो दिसा गर्ने घटनासँग कुनै पनि सम्बन्ध देखिदैँन । तर सोही समयमा भएको सेतो रंगको दिसालाई ​​बेवास्ता गर्न सकिदैन । दिसाको पित्तको कारण सामान्यतया: पहेंलो-खैरो रंग हुन्छ । सेतो रङ्गको दिसाले कि पित्त उत्पादन भएको छैन कि यो रोकिएको छ भन्ने संकेत गर्दछ । त्यसकारण यसलाई डाक्टरले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो परिवारको चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुहोस् ।
Q १० महिनाको बच्चालाई प्रत्येक दिन ६ वा ७ पटक बाडुली लाग्छ
बच्चाहरुलाई बाडुली लाग्ने केहि सामान्य कारणहरु बाफलाई फेरि पानी बनाउने रिफ्लक्सको विकार, चिसो तापक्रम, स्तनपान हुन् । बाडुलीले तपाईंको बच्चाको निद्रा वा खानालाई असर नगर्दासम्म तपाईंले चिन्ता मान्नु पर्दैन ।
Q बच्चाको कुहिनोमा चिलाउने हुन सक्छ ?
सबै चिलाउने अवस्था गम्भीर हुदैँनन्, खटिराले जीवाणुको संक्रमण वा फोका उठ्ने जस्ता गम्भीर संक्रमणलाई सूचित गर्न सक्ने भएकोले यसको लागि नजिकबाट ध्यान दिनुपर्दछ । भाइरस वा जीवाणु संक्रमणको कारणले सानो रातो वा गाढा थोप्लाहरु हुन सक्छन् । बच्चाको जीवनका केही सुरुका महिनाहरूमा, अन्य लक्षणहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि चिलाउने (जस्तै ज्वरो, खराब खाना खुवाउने, लापरवाही, वा खोकी) को डाक्टरले जतिसक्दो चाडों मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पर्दछ । बच्चाहरुको कुहिनामामा अवरुद्ध प्वालहरूको कारण खटिरा वा डन्डिफोरहरू आउन सक्छ । कुहिनोमा नरम क्रिम दल्दा क्याण्डिडियासिसको रूपमा दादको संक्रमण पैदा गर्दछ । सुख्खा, संवेदनशील छाला, र कहिलेकाँही एलर्जीले एक्जिमामा रातो, चिलाउने दागहरू हुन सक्दछ । अन्य चिलाउनेहरु जस्तै एर्थेमा टोक्सिकम-रातो दाग हुन हुन्छ, रक्त धमिनीहरुमा सामान पुर्याउने सालमोन प्याचेज- नेस्ट, मङ्गोलियन दाग-टाँसिने कमी सामान्यतया: बच्चाहरुमा देखापर्न सक्छ र अधिकांश पटक कुनै उपचारको आवश्यकता हुदैँन र उमेर अनुसार ठीक हुन्छ ।
Q म १४ वर्षको भए र मेरो छाती दुखेको छ । मलाई के असर परेको होला ?
तपाईंलाई के असर भएको छ भनेर मूल्यांकन गर्नको लागी, हामीलाई तपाईंको दुखाइ, लिङ्ग र जीवन शैलीको प्रकृतिको बारेमा धेरै जानकारीको आवश्यकता पर्दछ । तपाईंको उमेरमा छाती दुखेको केही सामान्य कारणहरू अम्लियता, तनाव, चिन्ता, लामो समयसम्म लागेको खोकी, छातीको भागमा हुने आघात, आदि हुन सक्छन् । मुटुको रोगको कारणले तपाईंको उमेरमा छाती दुख्ने कम सम्भावना हुन्छ । यदि यो लगातार भइरह्यो र धेरै जटिल भयो भने, आफैंले जाँच गर्नुहोस् ।
Q बच्चाहरुलाई ज्वरो आएको बेलामा पेट दुख्नु सामान्य हुन्छ ?
पेट दुख्ने समस्या भनेको सामान्यतः बच्चाहरुलाई ज्वरो आएको समयमा हुदैँन । तथापि, ज्वरोको कारणले तपाईंको बच्चाको पेट दुखेको छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्नेछ । पेटमा वा अन्य पेटको अंगमा भएको संक्रमणको कारण पेट दुख्न सक्दछ ।
*सर्तहरू लागू हुनेछन् बारम्बार सोधिने प्रश्न